Vaovao - YIWU, Sina, 12 Mey 2020 / PRNewswire / - Tamin'ny 10 Mey 2020, natomboka ny hetsika an-tserasera 2020 Andro Brand China.
YIWU, Sina, 12 Mey 2020 / PRNewswire / - Tamin'ny 10 Mey 2020, nesorina ny hetsika an-tserasera 2020 Andro Brand China. Amin'ny maha hetsika lehibe iray isan-taona ny marika eo amin'ny tsenan'i Yiwu, ny Yiwugo Top 10 mpivarotra fifaninanana dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fizotry ny fifidianana.
Ny fifaninanana, izay notontosaina tamim-pahombiazana tamin'ny taona fahavalo nisesy, dia nanolotra marika varotra vahiny manan-kery manana fahefana, toy ny Hailing GEMEI Small Home Appliance Firm, Nicole Fashion Jewelry, Zongxin Canvas Shoes, ary BAOLA, sns. Mba hanampiana bebe kokoa mpivarotra mametraka fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary mampiseho ny tanjaky ny marika, Yiwugo dia nanao fanitsiana vitsivitsy tamin'ny programa loka. Na dia manohy mifantina ny "Top 10 Vendors" aza dia hanasongadinana ny 10 "Leading Vendors", 80 "Model Vendors" ary 120 "Elite Vendors" ny fifaninanana. Tsara ny manamarika fa, tamin'ny fahatongavan'ny "Live Streaming Era for All", ny loka "Top 10 Influencers" dia nampiana ho an'ny fandaharana loka amin'ny fifaninanana amin'ity taona ity, miaraka amin'ny tanjona hahafahan'ny mpivarotra mampiseho ny sarin'izy ireo ary marika amin'ny alàlan'ny streaming mivantana, ka mahasarika ny sain'ny mpividy erak'izao tontolo izao amin'ny fomba mazava kokoa. Hanomboka ny 10 Mey 2020 ny fizotry ny fifidianana ary haharitra hatramin'ny 31 Desambra 2020. Hambara ny valiny aorian'ny 1 Janoary 2021.